मूत्रथैलीको क्यान्सर- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २५, २०७६ डा. अर्जुनदेव भट्ट
काठमाडौँ — मूत्रथैलीमा विभिन्न किसिमका अर्बुद रोग लाग्न सक्छ । परिवर्तित कोष क्यान्सर सबैभन्दा बढी देखिने गर्छ । यो मृगौलाको पेल्भिसदेखि मूत्रनलीको दुई तिहाइ ठाउँमध्ये जहाँ पनि देखापर्न सक्छ । सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत मूत्रथैलीमा देखिन्छ । ८ प्रतिशत मृगौलाको पेल्भिस र २ प्रतिशत मूत्रनलीमा पनि देखिन्छ ।
मूत्रथैलीको क्यान्सर पुरुष तथा स्त्री दुबैमा देखिए पनि पुरुषमा ४ गुना बढी हुन्छ । यो रोग सामान्यतया ५० वर्ष नाघेकामा देखापर्छ । तमाखुजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमा यो क्यान्सर धेरै गुणा बढी हुन्छ । यो रोग लागेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी आफूले चुरोट पिउने गरेको स्वीकार्छन् ।
रङ कारखानामा काम गर्ने, फेनासेटिन औषधि अधिक प्रयोग गर्ने तथा विकिरण प्रभावित व्यक्ति पनि यो रोगबाट बढी ग्रस्त हुन्छन् । सिसटोसोमिआसिस भन्ने जुकाबाट हुने रोग, मूत्रथैलीको पत्थरी र केही केमोथेरापीमा प्रयोग हुने औषधि पनि मूत्रथैली क्यान्सरका कारण हुन सक्छन् । खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादीले पनि यस्तो हुनसक्छ । जीन तथा अरू विभिन्न कारणतत्त्वको अनुसन्धान जारी छ ।
मूत्रथैली क्यान्सर ३ प्रकारका हुन्छन् । १) सतही २) मांसपेशीमा लाग्ने ३) स्थलान्तरण गर्ने । ७५ प्रतिशत मूत्रथैली क्यान्सर सतही हुन्छ । यो भित्रसम्म जरो नहाल्ने, नगिचका रक्तनलीहरूसम्म पहुँच नराख्ने र अरु ठाउँ नफैलिने हुन्छ । यस्तो रोग वर्षौंसम्म बारम्बार देखापर्छ तर ज्यानलाई खतरा हुँदैन । यी अर्बुद रुखजस्तो भएर उम्रन्छन् । धेरै ठूलो भएपछि रक्त सञ्चारको कमी महसुस गर्न थालेपछि केही भाग मृत भई झर्ने गर्छ ।
यो क्यान्सरले २० प्रतिशत मांसपेशीमा आक्रमण गर्छ । मांसपेशीभित्र जरा हाल्ने र रक्त सञ्चारलाई छिटो प्रभावित गर्छ । गहिरिँदै जाँदा छोटै समयमा ज्यानै जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ । मांसपेशीमा लाग्नमध्ये केही प्रतिशत स्थानान्तरण गर्ने क्यान्सरमा परिणत भई शरीरका विभिन्न भागमा फैलिन्छ ।
बिना पीडा पिसाबमा रगत देखापरे त्यसलाई मूत्रथैली क्यान्सर लक्षणको रूपमा लिएर जाँच गर्नुपर्छ । मूत्र तथा रक्त परीक्षण बाहेक अल्ट्रासोनोग्राफी तथा सिस्टोस्कोपी जाँच गरेर मात्र थैलीमा क्यान्सर भए–नभएको यकिन गर्न सकिन्छ ।
थैलीको क्यान्सर मांसपेशीभित्र घुस्रेको तथा थैली बाहिर फैलिएको थाहा पाउन छातीको एक्सरे, सिटिस्क्यान वा एमआरआई परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पिसाबमा अर्बुद कोषिका जाँच गरेर पनि हेर्नुपर्छ । कोखा दुख्ने, ज्वरो आउने, खान मन नहुने तथा तौल घट्ने जस्ता लक्षण प्रायः अर्बुद शरीर भित्रका विभिन्न ठाउँमा फैलिएको अवस्थामा मात्र देखिन्छ ।
मूत्रथैली क्यान्सरको कुन अवस्था छ, त्यो अनुरुप नै उपचार गर्नु पर्छ । सतही/मांसपेशीसम्म जरा नहालेको क्यान्सरलाई मूत्रनलीबाट भित्र थैलीमा औजार पुर्‍याएर काटेर निकालिन्छ । त्यस्तो उपचारपछि पनि क्यान्सर फेरि दोहोरिने प्रक्रिया करिब ५० प्रतिशत हुन्छ । त्यसरी दोहोरिँदै आउने क्यान्सरमध्ये ५ देखि २० प्रतिशत मांसपेशीभित्र जरा हाल्ने तथा अरु अङ्गमा फैलिने संभावना हुन्छ ।
सतही प्रकारका क्यान्सरलाई शल्यक्रिया बाहेक दुई अवस्थामा मूत्रथैलीभित्र औषधि हालेर थप उपचार गरिन्छ । बारम्बार पलाएर आउने र धेरै ठाउँमा उम्रेको क्यान्सरलाई सम्भव भए सम्पूर्ण रूपमा काटेपछि बीसीजी हप्तैपिच्छे कम्तीमा ५ हप्ता हालेर थप उपचार गरिन्छ ।
सतहमा फैलिने तर बढी खतरनाक सीआईएस नामका मूत्रथैली क्यान्सर पनि शल्यक्रियापछि मूत्रथैलीभित्र औषधि हालेर तथा विकिरण तरिकाले पूर्ण निको पार्ने प्रयत्न गरिन्छ । यस्तो उपचारपछि बिरामीलाई पहिलो वर्ष प्रत्येक ३ महिना, दोस्रो वर्ष ६–६ महिना र त्यसपछि ५ वर्षसम्मै वर्षको एकपल्ट सिस्टोस्कोपी गरेर निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
मांसपेशीभित्र जरो हाल्ने क्यान्सरलाई मूत्रथैलीको पूर्ण वा आंशिक शल्य विधिबाट निकालेर उपचार सुरु गर्नु पर्छ । पूर्ण लाभ निम्ति क्यान्सरका कोषिकाहरू थैलीबाट बाहिर फैलिएको हुनु हुन्न । शल्यक्रियापछि यस्ता बिरामीलाई विकिरण तथा केमोथेरापी पनि अनिवार्य हुन्छ । शरीरका विभिन्न अङ्गमा फैलिएको मूत्रथैली क्यान्सर केमोथेरापी, शल्य उपचारको उद्देश्य क्यान्सरको लक्षण शमन गरी जीवन लम्व्याउनु हुन्छ ।
मूत्रथैलीको क्यान्सर चुरोट खाने पुरुष तथा स्त्री दुबैमा प्रायः ५० वर्षपछिको उमेरमा देखापर्ने रोग हो । अल्ट्रासोनोग्राफी तथा सिस्टोस्कोपी परीक्षणबाट रोगको गम्भीरता थाहा पाउन सकिन्छ । सतही, मांसपेशीभित्र जरा हाल्ने र शरीरका विभिन्न अङ्गमा फैलिने गरी ३ प्रकारका मूत्रथैली क्यान्सर लाग्छ । यीमध्ये कुन प्रकारको क्यान्सर भएको हो यकीन गरी शल्य, केमोथेरापी, इम्युनोथेरापी र विकिरण जस्ता प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ । प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:४३
जेष्ठ २५, २०७६ दीपक बस्याल
काठमाडौँ — केही समयअघि मेरो फेसबुक फिडमा एउटा मिम देखापर्‍यो । एक प्रश्नकर्ताले ‘मलाई किताब पढेर निदाउन मनलागेको छ, कुन किताब पढ्ने होला ?’ भनेर सोधेको छ । उत्तर दिनेले फिजिकल केमेस्ट्रीको किताबको चित्र देखाउँदै ‘यो किताब पढेर दुई मिनेटभित्र निद्रा लागेन भने त्यसको ग्यारेन्टी मैले लिने भएँ’ भनेको छ । भलै यो एउटा ठट्टा हो, तर यसले आजको समग्र शिक्षा प्रणालीले ग्रहण गर्न मिल्ने अनेक सन्देश पनि बोकेको छ ।
मसँग चाहिँ कसैले ‘पढेर रुन मन लाग्ने किताब’ को सिफारिस खोज्यो भने सुझाव हुन्छ— ‘गणित किताब पढ्नू । तर त्यो गणित किताब नेपालमै नेपालीले नेपालीलाई पढाउन अंग्रेजीमा लेखिएको चाहिँ हुनुपर्छ ।’
किन र कसरी यी किताबले तपाईंलाई रुन बाध्य पार्छन् त ! त्यसको निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गणित प्राध्यापकले एउटा अन्तर्वार्तामा वर्तमान समयमा नेपालमा प्रकाशित धेरै गणित पुस्तक ‘चोरी गरिएका हुन्’ भनेका थिए । गणित पढेर र पढाएर जीवनको आधाउधी समय बिताएका प्राध्यापकको यो अभिव्यक्तिले गणित शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे खासै सकारात्मक सन्देश बोल्दैन ।
मयूरको शिखाजस्तै र नागको मणिजस्तै छ– वेदाङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त र ज्योतिष) मा सर्वश्रेष्ठ गणितशास्त्र हो भनेर वेदाङ्ग ज्योतिषमा भनिएको छ । हिन्दु गणितको इतिहास पल्टाउँदा गणित आफैमा छुट्टै शास्त्रभन्दा पनि ज्योतिष र खगोल शास्त्र संँगसँंगै हुर्किएको देखिन्छ । परापूर्वकालमा वस्तुभाउको गणना गर्ने तरिकादेखि आजको सुपर कम्प्युटरले गर्ने कामसम्म सबै विज्ञानकी रानी भनेर मानिने गणितशास्त्रकै छत्रछायामा हुर्किएका हुन् ।
नेपालमा सात सालको परिवर्तन हुँदा स्कुल र गणित पुस्तक केही सय हाराहारीमै थिए । सन् १९९० मा विद्यालय र विद्यार्थीको संख्यामा गुणात्मक बढोत्तरीसँंगै पुस्तकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भयो । सन् १९७१ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लेखिएपछि गणितका पुस्तकहरू पाठ्यक्रमले निर्देश गरे अनुरूप लेखिन थाले ।
सन् ९० को दशकमा निजी विद्यालयको आगमनसँगै अंग्रेजी माध्यममा लेखिएका गणित पुस्तकको माग बढ्न थाल्यो । पैसा र प्रतिष्ठा कमाउने रहरले हो वा लेखक बन्ने, देशको शिक्षा विकासमा एउटा इँटा थप्ने वा आफैले लेखेको पुस्तक पढाउने रहरले, अहिले नेपालमा अंग्रेजी भाषाका गणित पुस्तक लेख्नेहरू सयौँ होलान् भन्ने अनुमान पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका बुलेटिनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सन् १८८३–८४ तिर नेपाली भाषामा गणितको पहिलो पुस्तक ‘व्यक्तचन्द्रिका’ लेख्दै गर्दा लेखक गोपाल पाँडेले भनेका थिए— ‘गोर्खालीलाई गणित आउँदो रहेनछ भनेर दुनियाँले नभनुन् भनेर पर्वतीय भाषामा व्यक्तगणित बनाएको हो ।’ करिब दुई शताब्दी अगाडिको गोपाल पाँडेको त्यो चिन्ता आज गणितका किताब लेख्दै गरेका लेखक पुस्तालाई एउटा प्रेरणा हुन सक्छ नै, तर त्योभन्दा बढी लेखकले ‘के मेरो पुस्तकले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले मागेअनुरूप मापदण्ड र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ’ भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्नु हो ।
सन् ९० को दशकमै सरकारी विद्यालय पढ्दै गर्दा म नेपाली भाषामै लेखिएको गणित पुस्तक पढ्थेंँ । गृहकार्यको बोझ यस्तो हुन्थ्यो, खेल्ने र सुत्ने समयको कटौतीबिना भ्याउन सम्भव हुँदैनथ्यो । फेरि घरका टन्नै गाईवस्तुका लागि डोको–नाम्लो बोकेर घाँस काट्न जानुपर्थ्यो । बरु सजिलो स्कुलमा सरले ‘हात थाप् अल्छी’ भन्दा हात थापिदिन नै हुन्थ्यो ।
आखिर त्यो सबै केका लागि त ? के त्यति धेरै गृहकार्य जरुरी थियो ? पिटाइ जरुरी थियो ? गृहकार्य गर्नेहरूले नै आज प्रगति अथवा असल नागरिक बनेर जीवन व्यतीत गरेका छन् ? त्यो प्रश्न अब त्यो निमुखा शिक्षकलाई मात्रै होइन, बरु अझै पनि उही खालको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन विधि बनाउने नीति निर्माता, पाठ्यक्रम निर्माता अनि पाठ्य–पुस्तक लेखकहरूलाई सोधिनुपर्छ ।
अहिले यी प्रश्नले घोच्दै गर्दा, नेपालको विद्यालयमा पढाइ हुने पुस्तकहरू फेरि एकपटक अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो, अनुसन्धाताका रूपमा । विद्यार्थी हुँदा नबुझेका गणितका सूत्रहरू अचेल केही बुझिएको छ । विद्यार्थी हुँदा नदेखिएको पुस्तकको गल्ती आज केही देखिएको छ । त्योभन्दा पनि सिक्नु र सिकाउनु एउटा प्रक्रिया हो, सबैको सिकाइको रफ्तार फरक–फरक हुन्छ भन्ने कुरा पढ्न पाइएको छ ।
गल्ती नगरेर होइन, गल्तीबाटै दीर्घकालीन सिकाइ हुने कुरो न्युरोसाइन्सले बताएको छ भन्ने जान्न पाइएको छ । समस्या के भने त्यसो हुँदाहुँदै पनि पुस्तक लेखिने, परीक्षा लिने, गृहकार्य गर्ने–गराउने, पिट्ने–पिटाउने चलन र घोक्ने–घोकाउने हाम्रो चलन पुरानो भएको छैन । अनुसन्धान र नयाँ पाठ्यक्रमले पनि हाम्रा पुस्तकहरूले आधुनिक सिकाइ सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको, पाठ्यक्रमले सपना देखेजस्तो स्थानीय आवश्यकता र सामग्रीमा आधारित गणित प्रश्न समावेश नगरेको, गाह्रा तर घोक्नै प्रेरित गर्ने प्रश्न सोध्ने गरेको, सिर्जनात्मक हुने वातावरण बनाउन नसकेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ ।
गणित पुस्तकहरूमा भाषागत र तथ्यगत त्रुटिहरूको आधिक्य रहेको, गृहकार्य गर्दा सोच्न नपर्ने तर सार्नपर्ने कामलाई प्रेरित गरेको, लगभग सबै (९९ प्रतिशत) प्रश्नको संज्ञानात्मक माग (कग्निटिभ डिमान्ड) निम्नस्तरको भएको, गणितको प्रायोगिक पक्षलाई उजागर नगरिएको, प्रविधिको प्रयोग गर्न स्थान नदिएको, विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिन सक्ने प्रसङ्ग (ऐतिहासिक र वर्तमान प्रगति) नभएको, चित्रग्राफ र टेबलको न्यून प्रयोग गरिएको र भएका यस्ता सामग्रीको पनि उपयुक्त प्रयोग नगरिएको, सामाजिक–राजनीतिक चेतलाई सघाउने यथेष्ठ सामग्री नराखिएको, पठन सामग्रीको सिलसिलाको औचित्य प्रस्ट नभएको हाम्रो अध्ययनबाट भेटिएको छ । आफैमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको पुस्तकले कुनै अर्को विदेशी भाषाकै रूपमा प्रस्तुत गरिदिँदा गणित आफैमा निरस विषय बनेको छ ।
हाम्रै जस्तो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हुने दक्षिण कोरियाको उदाहरण हेरौँ ।
प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूको संलग्नता र वर्षौंको मिहेनतबाट बनेको पुस्तकले त्यहाँ तीन तहको परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो परीक्षा सतही तर पछिल्ला दुई परीक्षा भने निर्मम हुने गर्छन् । विषयविज्ञ संलग्न तीनै परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि पुस्तक लेखकले शिक्षण सहयोगी सामग्रीहरूको ड्राफ्ट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ड्राफ्ट पास भयो भनेमात्र पुस्तकहरूले प्रकाशनको अनुमति पाउँछन् । तर दक्षिण कोरियाका प्राथमिक स्तरका पुस्तकहरू भने या त विश्वविद्यालयले अथवा कुनै अनुसन्धान गर्ने संस्थाले लेख्ने जिम्मा पाएको हुन्छ । जोकसैले चाहँदैमा लेख्न पाउँदैन ।
हाम्रामा आखिर किन यति धेरै गल्ती हुने पुस्तकहरू पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेर पठाउँछ ? के स्वीकृत गर्ने प्रकिया नाम मात्रको हो ? होइन भने सामान्य एकपटक प्रुफरिड गरेर हटाउन सकिने, तर विद्यार्थीले पढ्दा त्यसले गलत अवधारणाहरू अवलम्बन गरेर दीर्घकालसम्म असर गर्नसक्ने खालका त्रुटिसम्म नदेख्ने विषयविज्ञ कसरी हुन्छ ? विषयविज्ञको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गर्नुपर्छ । जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समयमा विद्यावारिधि समकक्षता बाँडिएको छ, त्यसबाट भविष्यमा निम्त्याउने भनेको यस्तै खालका विज्ञ अनि रुवाउने पुस्तकहरूको बाढी नै हो ।
त्यसो त पर्याप्त पूर्वाधार, शिक्षकको मैत्रीपूर्ण व्यवहार, रचनात्मक सिकाइ शैलीबाटै सिक्ने–सिकाउने प्रक्रिया सहज र उत्पादक हुने हो । पुस्तकको प्रयोग कक्षाकोठामा आइपुग्दा कसरी गरिन्छ–गराइन्छ भन्ने पनि अध्ययनकै विषय हो । तर पनि पुस्तक एउटा प्रस्थानविन्दु, शिक्षकको नोटको आधार, गृहकार्य, सूत्रहरू आदिको पोको भएका कारण यसको गुणस्तरले समग्र शिक्षाको प्रगतिमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:४१